१५ वर्षदेखि अशक्त आमालाई बोकेर काम खोज्दै थिए, काम दिनेहरु शर्त सुनेपछि पछि हट्थे, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
१५ वर्षदेखि अशक्त आमालाई बोकेर काम खोज्दै थिए, काम दिनेहरु शर्त सुनेपछि पछि हट्थे
बेइजिङ। दक्षिण पश्चिम चीनमा बस्ने एक युवकले अब आफ्नी पक्षघात (प्यारालाइसिस) ग्रस्त आमालाई पिठ्युँमा बोकेर हिँड्ु पर्ने छैन । यी युवक विगत १५ वर्षदेखि आमालाई पिठ्युँमा बोकेर राम्रो जागिर खोजिरहेका थिए । पिताको मृत्युपछि आमाको जिम्मेवारी उनीमाथि आएको थियो र उनी आमालाई नै आफ्नो संसार मान्थे । यही कारण उनी आफ्नी आमालाई कहिल्यै एक्लै छोड्दैनथे । अहिले भने उनले जागिर मात्र होइन बस्नको लागि घर पनि पाएका छन् ।
चीनको चोंगक्विंग जिल्लाको फ्युनिउ गाउँका ३७ वर्षका वांग जियानक्विंगले १५ वर्ष आमालाई पिठ्युँमा बोकेर भौंतारिएपछि अहिले आएर काम र सरकारी योजनाअन्तरगत घर पाएका छन् । उनले सफाइकर्मीको काम पाएका छन् । अब उनी पक्षघातग्रस्त आमालाई बोकेर ठक्कर खाँदै हिँड्नुपर्ने छैन । वांग १४ वर्षको हुँदा उनकी आमा लडेकी थिइन् त्यसपछि उनलाई पक्षघात भयो । त्यसपछि वांगका पिताले आमाको हेरचाह गर्थे । तर २००३ मा पिताको मृत्यु भएपछि घरको सबै जिम्मेवारी वांगमाथि आयो । अर्कोतर्फ आमा टियान जिंगुइलाई आफ्ना पतिको मृत्यु भएपछि मानसिक धक्का लाग्यो र उनी छोराबाहेक अरु सबैसँग बोल्न छाडिन् ।
पिता जीवित हुँदासम्म वांग आफ्नो गाउँबाट सुदूर पूर्वमा रहेको झेजियांग राज्यमा काम गर्थे । पिताको मृत्युपछि भने आमाको हेरचाहको जिम्मेवारी उनीमाथि आयो र उनी काम छोडेर गाउँ फर्के । त्यसपछि उनले गाउँमै काम खोज्ने कोसिस गरे । जति कोसिस गरे पनि गाउँमा काम नपाएपछि उनी कामको खोजीमा अन्य शहरमा जान थाले । यसरी शहर शहर घुम्दा उनी आमालाई पिठ्युँमा बोकेरै हिँड्थे । रोगका कारण आमा गाडीमा सफर गर्न सक्दिनथिन् । यही कारण वांग आमालाई पिठ्युँमा बोकेरै काम खोज्दै हिँड्थे ।
वांग कम तलबमा पनि काम गर्न तयार थिए तर यसको लागि उनको एउटै शर्त थियो । उनी ड्युटीको समय केही कम गर्न चाहन्थे । उनलाई उनले चाहेको समयमा मिल्ने गरी काम चाहिएको थियो किनकि उनले घर गएर आमाको लागि खाना बनाउनुपथ्र्यो र आमालाई घुमाउन पनि लैजानुपथ्र्यो । वांगका अनुसार काम दिनेहरुलाई उनको माग धेरै लाग्थ्यो र उनीहरु काम दिन पछि हट्थे । अहिले भने उनको गाउँकै समितिले मिलेर उनको मद्दत गरेको हो । समितिले उनलाई उनको गाउँमै सफाइकर्मीको काम दिएको छ । एक सरकारी योजनाअनुसार उनको घर पनि बनेको छ ।